Hel Aqba Maqnaanshaha Maareynta Macluumaadka iyo Macluumaadka Shabakadaha Iskaga Qaadashada Waqtigeena Badbaadin doona Waqtigeena - Dib u Eegid Kedis ah
Qalabaynta shabakada shabakada waxaa loogu talagalay inay soo uruuriso macluumaadka macnaha leh ee shabakadaha. Waxay shaqadooda ku qabtaan Java, C ++, Python, Ruby, iyo sidoo kale luuqadaha barnaamijyada kale. Qaar ka mid ah shabakadda shabakadda iyo adeega macdanta macdanta ayaa ku filan oo ku filan si aad u hesho xog sax ah oo aan khalad aheyn gudahooda seken. Qaar ka mid ah codsiyada ugu caansan ayaa laga dooday hoosta:
Waa mid ka mid ah adeegyada ugu faa'iido leh oo cajiib ah oo ka soo baxa oo naga ilaalin doona waqtigeena. Soo dejinta. Io waa barnaamij dhammaystiran, bilaash ah oo masaakiinta ah oo kaa caawinaya xoqidda macluumaadka faa'iidada leh ee laga helo tiro aan xadidnayn oo goobo iyo blogyo. Adeeggani wuxuu ku daaweynayaa boggayaga internetka sida ilaha xogta ee suurogalka ah in laga dhaliyo API. Sidaa darteed, waxay badbaadineysaa waqtigeena, waxayna ku haboon tahay ganacsiyada iyo shirkadaha waaweyn. Soo dejinta. io ma shaqeyneyso bogagga aad horey u shaqeyn jirtay. Khasaarada kaliya ee soo dejinta. Io waa in aysan awood u lahayn in ay ka socoto hal site oo kale. Waxay ka dhigan tahay inaad gashid URL-yada aad rabto inaad xogta ka soo qaadato gacanta.
Waa adeeg cusub oo dib loo cusbooneysiiyay. Uipath waxay ku takhasustay xogta iyo kaydinta macmiilka ay isticmaalaan. Waxay qaban kartaa shaqooyin badan mar markaa waxayna ku haboon tahay labada calaamadood iyo kuwa aan codeyninba. Waxaa intaa dheer, barnaamijkani wuxuu leeyahay bogag muuqaal leh oo weyn waxayna ku xoqin kartaa faylashaada PDF, helitaanka natiijooyinka la rabay iyo in aad ku badbaadiso waqtigaaga saarista xogta. Waxaad ubaahan tahay inaad furto jihada, adoo sheeg URL-yada aad rabto inaad ka tirtirto xogta laga soo bilaabo iyo Uipath waxay bilaabi doontaa inay fuliso hawsheeda. Arjigan ayaa si sahlan u qodaya fiilada wuxuuna kugu qaadi karaa xogta la akhrisan karo oo la qaadi karo gudahooda gudahooda. Waxaad heli kartaa dukumentiyada CSV iyo Excel. Inaad noqoto barnaamij cayiman, Uipath ma noqon doonto mid ku haboon bilaabida maaddaama ay tahay qiimo yar.
Kimono Labs waa doorka koowaad ee barnaamijyadaa, saxafiyiinta, shaqaaleysiiyeyaasha, kuwa websaydhka, shirkadaha, iyo shakhsiyaadka aan farsamada ahayn. Waxay qabataa xog badan oo la xoqdo isla markaana waxay ka kooban tahay hawlaha macdanta isla waqti isku mid ah. Qalabkani wuxuu ku shaqeeyaa habka wax lagu naqshadeeyo, kaas oo kuu oggolaanaya inaad aragto ama kormeerto tayada xogta inta lagu xoqayo. Sidoo kale, Kimono Labs waxay ku habboon tahay inta kudhowaad dhamaan daalacashada internetka iyo nidaamyada hawlgalka. Kama bixineyso bogga bogga, waana inaad waqti ku qaadataa inaad ku tababarto Kimono Labs ka hor inta aan xogta laga soo bixin qaababka la doonayo Source .